Ambohidahy-Ankadindramamy: zazalahy roa indray maty nofaohin’ny fiara 4×4 | NewsMada
Fiara tsy mataho-dalana iray, nitera-doza tetsy amin’ny lalana iray anatin’ny fokontany Ambohidahy-Ankadindramamy, omaly tokony ho tamin’ny sivy ora sasany teo ho eo. Niara-maty tamin’izany ny zazalahy miisa roa…
Lozam-pifamoivoizana nahatsiravina ny niseho tetsy Ambohidahy-Ankadindramamy, omaly maraina. Hamakivaky ny lalana midina amin’ny toerana iny, indray maty voadonan’ny fiara izy roa lahikely. “Nidina ny lalana ilay fiara ary tsy nisy nanampo ny loza satria feno tsena ny lalana”, hoy ny nanatri-maso. Voahitsaka tamin’izany ilay zazalahy telo taona ka maty teo no ho eo. Tetsy ankilany, naratra mafy ilay tovolahy faharoa ka nentina haingana namonjy toeram-pitsaboana. Minitra vitsy taorian’ny namonjeny hopitaly, tsy tàna ny ain’io tovolahy kely io. Tsiahivina fa efa nisy lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona ampolony, vao taona vitsy lasa monja izay, teo amin’io lalana io ihany. “Tsy vao sambany ity lalana ity ny namoa-doza tahaka izao ka ilana fandraisan’andraikitra avy amin’ny mpitondra fanjakana hisorohona izany”, hoy ny ny mponina eny an-toerana.
Miaramila ilay mpamily fiara…
Taorian’ny nitrangan’ny loza, tonga teny an-toerana ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny boriborintany fahatelo (CSP3) nijery ny zava-nisy sy nanao ny fanadihadiana. Fantatra tamin’izany fa miaramila ny mpamilin’ilay fiara nahavanon-doza ka notanana avy hatrany. Tsy marina, noho izany, ny filazana fa nitsoaka io nahavanon-doza io, araka ny feo miely. Efa notazonina anaovana fanadihadiana eny amin’ny borigadin’i Tanà Ville eny Betongolo ity miaramila ity.